Memcached: qeexitaan, naqshadaha iyo talaabooyinka ugu horeeya
Memcached: sharaxaad fudud oo ku saabsan xogtan In-Memory waxqabadka codsiyada firfircoon ee keydka xogta ku xiran. Xogtan
waxay suurtogal ka dhigeysaa gaar ahaan in laga hortago marin u helida disk-ka adag si loola tashado xogta ku jirta RAM-ka. Tani ma aha oo kaliya inay soo dejiso nidaamyada dhammaadka-dambe, laakiin sidoo kale waxay si weyn u yareysaa daahitaanka. Websaydhyada caanka ah sida YouTube, Facebook, Twitter iyo Wikipedia ayaa muddo dheer isticmaalayay faa'iidooyinka xalka furan ee furan
waxayna markaa dadka isticmaala internetka siinayaan waayo-aragnimo ay ku baaraandegaan. Laakiin sidee dhab ahaan Memcached u shaqeeyaa iyo sidee ayaan ugu bilaabaa? Waxaad ku baran doontaa dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato nidaamkan kalluumeysiga caanka ah ee maqaalkan. Soo koobid
Waa maxay Memcached?
Muxuu u egyahay qaab dhismeedka Memcached?
Sidee ayuu Memcached u shaqeeyaa? Xaaladahee Memcached loo adeegsadaa?
nidaamka qafisyada ayaa soo saaray ku dhowaad labaatan sano ka hor shirkadda Danga Interactive oo loogu talagalay bogga tooska ah ee LiveJournal. Server-kaydkan waxaa loo sameeyay si looga fogaado marin-u-helidda xogta gaabis ah marka la adeegsanayo codsiyada websaydhka dalbanaya. Xalku wuxuu ka kooban yahay iyadoo la adeegsanayo xog-ururin ku jirta xusuusta taas oo suurtagal ka dhigeysa in walxaha lagu diiwaangeliyo xusuusta gelitaanka aan kala sooca lahayn ee ay heli karaan isticmaalayaasha bogga Internetka waqtiga diiwaangelinta. Software Memcached The sidaas waa mid aad u user-saaxiibtinimo oo waxay bixisaa arakibidda fudud, qaab-dhismeedka iyo maaraynta. Waxaa lagu bixiyaa ruqsadda BSD si markaa loo isticmaali karo, wax looga beddeli karo ama looga koobiyeyn karo si xor ah.
Qaab dhismeedka guud ee qaab dhismeedka Memcached waa mid fudud. Waxay u egtahay nidaamka xogta la wadaago waxayna ka kooban tahay arjiga, maktabad macmiil, iyo barkad tusaale ahaan Memcached ah. Tirada la rabo ee dhacdooyinka ah waa in lagu rakibaa xusuusta ugu weyn ee serverka. Waxaa ugu wanaagsan in la hawlgeliyo tusaale ku saabsan server kasta oo sameyn kara xusuus la'aan. Isku soo wada duuboo, xaaladahaani waxay helayaan boos bilaash ah oo loo heli karo keydka . Maktabada macmiilku waa isku xidhka ka dhexeeya arjiga u dhigma iyo Memcached. Waxay kaydisaa xogta la duubay waxayna ku dhigtaa server horay u jiray. Waad ku mahadsantahay qaab dhismeedka "multithreaded",
Memcached sidoo kale wuxuu isticmaali karaa dhowr geedi socod oo muhiim ahs isla wakhtigaas.
Memcached ka sokow,
Redis waa xog-ururin kale oo xasuusta ku jirta. In kasta oo Memcached ay u taagan tahay fudeydkiisa, Redis wuxuu bixiyaa fursado badan oo codsi iyo shaqeyn ah. Isbarbar-dhigga tooska ah ee
, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato software-ka ku habboon yoolalkaaga. >
Macluumaadka dhaqameedku waxay ku keydiyaan xogta dirawal adag, doorbidayaa Solid-State-Disk (SSD). Taas bedelkeeda, marka la eego Memcached, xogtu waxay ku sii jirtaa xusuusta si markaa looga heli karo gudaha microseconds , taas oo meesha ka saareysa dib u dhaca uu keenay dib u dhaca la xiriira la-tashiga xogta. In kasta oo ay suurtagal tahay in la keydiyo xogta muddo dheer, haddana inta badan xogta si toos ah ayaa loo tirtiraa muddo cayiman ka dib.mps. Tan waxaa ugu wacan xaqiiqda ah in Memcached uu yahay cache habboon
, oo aan ahayn keydka xogta ee dareenka caadiga ah ee ereyga Sidaa darteed xogta yar ee la isticmaalay waa la tirtiraa isla markaaba aysan jirin meel u banaan waxyaabaha cusub. Laakiin sidee ayay dhab ahaan hawsha diiwaangelintu u shaqeysaa?
Marka laga hadlayo Memcached, waxaan sidoo kale ka hadlaynaa In-Memory database qaab muhiima / qiimo leh
. Xidhiidh ayaa markii ugu horreysay lagu aasaasay adeegaha iyadoo la adeegsanayo qawaaniinta
TCP iyo Ip
. Haddii isticmaaluhu doonayo inuu eego xogta qaarkood, Memcached wuxuu hubiyaa in xogtaasi ku jirto keydka iyo in kale. Haddii kale, xogta lagama maarmaanka ah waxaa laga soo qaatay xusuusta ugu weyn. Macmiilku wuxuu markaa ku darayaa qiime muhiim ah xogta khuseysa ama xogtan waxaa si taxane ah u leh maktabadda barnaamijka. Adoo adeegsanaya hash algorithm , macmiilka ayaa markaa dooranaya serverka ay xogta ku keydsan tahay sida setaxanaha dabeecada. Waa kuwan shanta qodob ee ugu muhiimsan ee lagu garto Memcached:
xogta waxaa kaliya loogu gudbiyaa adeegaha;
xogta waxaa lagu keydiyaa inay yihiin lammaaneyaal muhiim / qiimo leh;
kala duwan server ma wadaagaan xogta midba midka kale; adeegeyaashu kaliya waxay wax u qoraan RAM; haddii ay dhacdo boos ku filan, adeegu wuxuu tirtirayaa xogta ugu da'da weyn.
Maxay yihiin faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka Memcached?
Ku Haboonida Memcached sida xalka kaydintu waxay kuxirantahay Shuruudaha iyo kakanaanta
isku-darka arjiga u dhigma
. Nidaamkan xusuusta ku-meel-gaarka ah wuxuu si gaar ah ugu habboon yahay codsiyada websaydhka leh taraafikada badan iyo goobaha laga helo xaddi badan oo xog ah. Faa'iidooyin badan oo ay leedahay ka sokow, waxay kaloo la timaaddaa waxyeellooyin yar. Halkan waxaa ah muuqaal guud oo ku saabsan faa'iidooyinka iyo qasaaraha:
Waqtiyada falcelinta aadka u gaaban adoo keydinaya qiimaha In-Memory-ka Kaliya si ku meelgaar ah ayaa loo keydiyaa xogta waana la waayaa haddii ay dhacdo in lagu guuldaraysto d 'tusaale Memcached ah
Qaab dhismeedka isku dhafan ee kaladuwan ayaa u ogolaanaya iskudhafka toosan ee awooda xisaabinta
Xogta lama daawan karo, taasoo ka dhigaysa qalabixinta inay adagtahay
Xal furan oo il furan oo leh kaydinta xogta furan
Dhererka furaha qiimaha wuxuu ku egyahay 250 xaraf (1 MB)
Waxay bixisaa maareyn sahlan iyo dabacsanaanta horumarinta arjiga habab farsamo la’aaneed ayaa u baahan dab-damisyo dheeri ah
Waxay taageertaa qaababka xogta furan iyo macaamiisha ugu caamsan iyo luuqadaha barnaamijka Non redonsidaa darteed wax nabadgelyo ah kama-hor-imaadyada ka yimaada shaqo-ka-joojinta ama keydinta xogta
Kiiskee ayaa Memcached loo adeegsadaa?
Baaxadda xifdinta leh waxaa ka mid ah qafis iyo fadhigga xogta Marka ay timaaddo keydinta, waxyaabaha si ku meelgaar ah loo keydiyay sida faylasha, data iyo sawirrada ayaa lagu diyaariyey waqtiga diiwaangelinta. Tani waxay hagaajinaysaa waxqabadka arjiga la saameeyay waxayna u oggolaaneysaa qiyaasta qiimaha jaban haddii culeysku kordho. Horumariyayaashu sidoo kale waxay adeegsadaan Xusuusta-gudaha si ay u maareeyaan xogta kulanka sida astaamaha isticmaalaha ama heerarka kal-fadhi ee heer-Internet ah. Si kastaba ha noqotee, tani waxay u maleyneysaa in joogtaynta xogta aysan ahayn shuruud muhiim ah. Xaaladaha badankood, Memcached waa xalka ugu fiican marka codsiyada loo baahan yahay keydinta waxqabadka sare iyobaaxad weyn.
Ku bilaabida Memcached
soo dejin bilaash ah
. Marka laga reebo xirmooyinka ku habboon ee soo-saaraha, waxaad sidoo kale u baahan doontaa
oo u oggolaanaysa in lagu qariyo ogeysiiska dhacdooyinka. Waxay kuxirantahay luuqada barnaamijka loo isticmaalo, waxaad yeelan doontaa fursado qaabeyn oo kaladuwan oo macaamilka iyo adeegaha kadib rakibaada. > sanado badan. Taasna waa ku mahadsan tahay, khadka tooska ah waxaad ka heli kartaa codsi faahfaahsan, maareyn, iyo macluumaadka cilad bixinta ee API-yada kala duwan iyo nidaamyada hawlgalka.
Saldhigyada sharciga ah ee dukaanka internetka
2021-04-18 15:04:03 | Casharro
Aasaaska Sharciga ee Dukaanka Onlineka Dad badan ayaa ku haminaya inay ganacsi bilaabaan. Laakiin "ahaanshahaaga maareeyahaaga" sidoo kale wuxuu ku luuqeeyaa ogaanshaha sida loo qaado mas'uuliyadda, iyo inaad awood u leedahay inaad daryeesho caqabadaha sharciga qaarkood. Maamule ahaan, sidaas dartee...
Sidee loo iibsadaa magac domain? Tilmaam tallaabo-tallaabo ah
2021-04-18 02:45:18 | Casharro
Sida loo iibsado magac domain Maanta, degel wuxuu u adeegaa sidii "kaarka ganacsiga dhijitaalka ah" ama barta lagala xiriiro macaamiisha. Markaa waxay noqotay mid lama huraan ah in mid la yeesho. Bogagga warbaahinta bulshada ayaa sidoo kale bixiya barxad aad u wanaagsan oo ay ku soo bandhigaan khadk...
Sida Loo Kordhiyo Muhiimka Websaydhka Webka ee WordPress (Hagaha Guud)
2021-04-17 13:27:23 | Casharrada
Ma rabtaa inaad ku hagaajiso Muhiimadda Websaydhka Websaydhka ee loo yaqaan 'WordPress'? Webka Muhiimka ah ee Webka waa tallaabo ay soo saartay Google oo ka caawinaysa milkiileyaasha degellada inay horumariyaan waayo-aragnimada isticmaalaha iyo tayada degelladooda. Tilmaamahan ayaa muhiim u ah guush...
Waa imisa qiimaha magac domain ah? Sharaxaad iyo tusaalooyin
2021-04-16 00:05:13 | Casharro
Waa imisa qiimaha magac domain ah? Tabaha loogu talagalay Qorsheynta Miisaaniyaddaada Ganacsiyada iyo kuwa madaxbanaan ee maanta si dhib yar ayey ku qaban karaan iyaga oo aan lahayn degel internet ah. Waa qalab muhiim ah markaad rabto inaad kordhiso wareeggaaga, aad kasbato macaamiil cusub ama aad u...
Fariin bilaash ah & cinwaanka emaylka | Isbarbardhiga sanduuqa emaylka
2021-04-10 22:08:39 | Casharro
Isbarbardhigga Farriinta Bilaashka ah 300 bilyan e-mayl maalin kasta adduunka oo dhan - taasi waa mugga emayllada. Xitaa da'da farriinta degdegga ah, shabakadaha bulshada iyo taleefanka fiidiyowga ah, weli suurtagal maahan in la qiyaaso nolol maalmeedkeenna, gaar ahaan shaqada, iyada oo aan email lo...
Qaabilaadaha Muuqaalka: toobiyeyaasha ugu muhiimsan ee kumbuyuutarka
2021-04-10 22:04:11 | Casharro
Gawaarida Outlook si loo ogaado E-mayl, ama emaylka elektaroonigga ah, waxay noqdeen habab doorbid isgaarsiineed muddo sannado ah Isticmaalka farriinta elektiroonigga ah hadda waxay ka mid tahay nolol maalmeedka dad badan. Diritaanka emaylku waa deg deg oo fudud. Macaamiisha emaylka Muuqaalka 'Outlo...
Sida loo diro ogeysiisyada Twilio SMS ee WooCommerce (talaabo talaabo)
2021-04-10 15:39:48 | Casharrada
Ma dooneysaa inaad ka dirto ogeysiisyada Twilio SMS ee WooCommerce? Ogeysiisyada SMS, waxaad kula xiriiri kartaa macaamiishaada, ogeysiin kartaa cusbooneysiinta dalabka, u dir kartaa lambarrada qiimo dhimista, iyo inbadan. Maxaad ugu dartay ogeysiisyada SMS ee WooCommerce? Ogeysiisyada SMS waa habka...
Sida loo abuuro WordPress-pop-up ku saleysan goobta (talaabo talaabo)
2021-04-10 15:38:04 | Casharrada
Ma rabtaa inaad sameysid gujisid WordPress ah oo ku saleysan goobta martidaada Abuuritaanka soosaarida ku saleysan barta WordPress waxay kaa caawineysaa inaad gaarsiiso fariinta saxda ah ee suuqgeynta, dadka saxda ah, waqtiga saxda ah. Tan macnaheedu waa khibrad adeegsi oo wanaagsan iyo dakhli badan...
Kulan Google: loogu talagalay shirarka kooxda fiidiyaha
2021-04-03 18:31:29 | Casharro
Waa maxay Shirarka Kulamada Google iyo shirarku si isa soo taraysa ayey uga socdaan khadka tooska ah, iyo wada-hadalka fiidiyowga oo siman ayaa muhiim u ah ganacsi kasta. Da'da talabixinta iyo qaabdhismeedka ururada adduunka, barnaamijyada kulanka khadka tooska ah ayaa muhiim noqday. Xaaladdan dhexd...
Abuur kulan Ballaaran: waa kan sida loo jadwaleeyo kulanka Zoom
2021-04-03 18:29:41 | Casharro
Abuur kulan Ballaaran: waa tan sida loo jadwaleeyo kulan ku saabsan Zoom Video shirarka wuxuu qayb ka noqday shaqo maalmeedka xirfado badan. Awood u lahaanshaha inaad kulaxiriirto kooxdaada, fiidyow ahaan ama maqal ahaan, maahan kaliya mid muhiim ah markaad ka shaqeyneyso guriga, laakiin sidoo kale ...
Sanduuqa TV-ga | Isbarbardhiga sanduuqyada kala duwan ee warbaahinta badan 2021
2021-04-03 18:27:55 | Casharro
Isbarbardhiga sanduuqyada TV-ga ee kaladuwan: qulqulka degdega ah ee hal guji Daawashada taxanaha iyo filimada khadka tooska ah waa qayb ka mid ah nolol maalmeedka jiilka dhalashada dhijitaalka ah. Ku dhowaad cidina ma daawato warka weli marka qaybta soo socota ee taxanaha ay ugu jecel yihiin ay bil...
Waa maxay Dhaladka Buluuga ah? Qeexid iyo sifooyin
2021-04-02 21:15:18 | Casharro
Sharaxa Fudud ee Dhaladka Cloud Muddo hadda ah, xisaabinta daruuriga dib dambe looguma noqon karo uun isbeddel ku-meel-gaadh ah oo ku saabsan horumarinta software-ka. Shirkado badan, daruurtu waxay runtii u noqotay mishiin dijitaal lagama maarmaan u sahlaya moodellada cusub ee ganacsiga iyo kordhint...
Memcached vs Redis: isbarbardhigga keydka macluumaadka-In-Memory
2021-04-02 21:14:00 | Casharro
Memcached vs Redis: Isbarbardhiga Databatyadan Xusuusta-Dheer Iyadoo la adeegsanayo keydadka keydka ah sida Memcached iyo Redis waxay si weyn kor ugu qaadi karaan waxqabadka codsiyada firfircoon ee dalbanaya markay ku xirmayaan keydka. Labadan xalka ilaha furan waxay ku shaqeeyaan mabda 'lamid ah. S...
Sida loogu daro Amazon Ads boggaaga WordPress (3 dariiqooyin)
2021-04-01 20:00:41 | Casharrada
Ma rabtaa inaad ku darto xayeysiiska Amazon bartaada WordPress? Xayeysiinta Amazon waxay noqon kartaa hab fiican oo lacag looga helo internetka. Waxaa intaa sii dheer, waxay leeyihiin hannaan oggolaansho ka dhaqso badan oo fudud marka la barbar dhigo shabakadaha kale ee xayeysiiska ah. Qormadan, wax...
Sida loogu daro rukummada WooCommerce (bilaash bilaash ah)
2021-04-01 19:56:59 | Casharrada
Ma dooneysaa inaad ku darto macaamiisha WooCommerce ee WordPress? Ku darista liiska waxay kuu ogolaaneysaa inaad bixiso rukhsad, aad abuurto waxyaabo heer sare ah isla markaana aad u abuurto dakhli isdaba joog ah ganacsigaaga. Qodobkaan waxaan ku tusi doonaa sida loogu daro macaamiisha WooCommerce e...